Shiinaha Qiimaha macquulka ah Shiinaha A36 Galvanized Steel dalool xaashida birta ah ee warshadda iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Sheetka Daloolintu waa badeeco xaashi ah oo lagu feeray cabbirro kala duwan iyo qaabab dalool oo soo jiidasho leh.Waxay bixisaa kaydinta miisaanka, marinka iftiinka, dareeraha, codka iyo hawada, iyadoo bixinaysa saameyn qurxinta ama qurxinta.Waraaqaha Birta Daloola waxay ku badan yihiin naqshadaynta gudaha iyo dibedda.
Iyadoo ay taageerayaan koox heer sare ah oo IT ah oo xirfad leh, waxaan ku siin karnaa taageero farsamo oo ku saabsan iibka hore & adeegga iibka ka dib ee qiimaha macquulka ah ee Shiinaha A36 Galvanized Steel Perforated Metal Sheet, Alaabadayada iyo xalalkayada ayaa si ballaaran loo aqoonsan yahay laguna kalsoonaan karo isticmaalayaasha waxayna si joogto ah ula kulmi karaan baahida dhaqaale iyo bulsho oo beddeleysa.
Being supporting by an advanced and professional IT team, we could offer technical support on pre-sales & after-sales service for China Perforated Steel Sheet , xaashi bir dalool , We adhere to the honest, efficient, practical win-win run mission and people falsafada ganacsiga ku jihaysan.Tayo aad u wanaagsan, qiimo macquul ah iyo qanacsanaanta macaamiisha ayaa had iyo jeer la raacaa!Haddii aad xiisaynayso alaabtayada, kaliya isku day inaad nala soo xiriirto faahfaahin dheeraad ah!
2.Grade: G330, dhammaan si waafaqsan codsiga macaamiisha
7.zinc daahan: 30-275g/m2
8.Spangle: eber spangle, spangle yar, spangle caadiga ah, spangle weyn
Waxaan bixin karnaa Adeeg Feedh gaar ah
Haddii qaabka daloolinta 60- ama 45-degree ama khadka tooska ah uusan ku habboonayn codsigaaga khaaska ah, kaliya na ogeysii!
1. Qabowga iyo taarikada birta duuban ee kulul waxaa lagu nadiifiyaa iyadoo la dhaqayo alkali, biyo lagu dhaqo, la qalajiyo ka dibna waxaa lagu daajiyaa foornada kuleylka ah ee jiifka ah (vertical) ee lagu kululeeyo tuubooyinka iftiinka, waxaana lagu shubaa qadar qadar ah oo hydrogen ah foornada si loo yareeyo jawiga foornada.
2. Xarigga birta ah ee lagu kululeeyay heerkul gaar ah ayaa lagu dhex shubaa dareeraha zinc ee galvanizing kulul xaaladaha qaarkood.
3. Cabbirka ubaxa zinc waxaa lagu xakameynayaa ka kooban zinc dareeraha ah.Isla mar ahaantaana, habka qaboojinta qasabka ah ayaa la qaataa.Ka hor inta uusan ubaxa zinc bilaabin inuu faafiyo, alaabada yar ee ubaxa zinc si degdeg ah ayaa loo qaboojiyaa qalabka ubaxa yar ee zinc si looga hortago in dareeraha zinc uu sii wado faafitaanka oo uu sameeyo ubax yar oo zinc ah.
4. Galvanizing kulul ka dib, ka dib markaad sugto qaboojinta boostada, dhammee dusha sare.Ugu dambeyntii, sida ku cad codsiga, u samee daaweynta bacriminta dusha sare siday u kala horreeyaan ama si toos ah u soo saar guddiga gariiradda midabka midabka leh.
ZZ waxa ay u adeegi kartaa sidii Ishaada Kaliya ee Daloola ee Wareega Daloosha ee Daloola
ZZ Steel waxay bixisaa xaashi bir ah oo daloolsan oo ah heerka 60-degree staggered, 45-degree staggered iyo qaabab toosan.Iyada oo ikhtiyaarka ah, jihada jaranjarada ayaa caadi ahaan ku beegan cabbirka gaaban ee xaashida birta, halka qaabka daloolka tooska ah uu caadi ahaan barbar socdo cabbirka dheer.
Waxaad ka heli kartaa go'yaal daloolsan oo laga sameeyay agabyo kala duwan oo tayo sare leh, oo ay ku jiraan birta kaarboon, birta 304, birta galvanized iyo aluminium.
Waa maxay faa'iidooyinka saxan galvanized bir ah oo dalool ah xaashi bir daloolin oo godad leh?
Waa maxay sababta qaababka dalool ee wareega birta daloolsan loogu doortaa in ka badan godadka labajibbaaran ama daloolsan?Sababtoo ah waxay bixiyaan isku dhafka ugu fiican ee sahlanaanta wax soo saarka, dayactirka hooseeya, iyo kharashka.Waxa kale oo aad helaysaa xulashada ugu ballaadhan ee cabbirrada, dhexroorka, fursadaha cabbirka xaashida iyo xulashooyinka agabka, taas oo sahlaysa inaad hesho badeecada ugu habboon baahiyahaaga.Daloollada wareega ee birta daloolku waxay sidoo kale ka dheer tahay noocyada kale, taasoo ka dhigaysa beddelka ugu kharash-oolsan mustaqbalka fog.
Waxaad u isticmaali kartaa xaashida birta daloolin waxyaabo badan oo kala duwan
Alaabta xaashida birta daloolisay waxa loo isticmaali karaa arimo badan oo shaqayn iyo qurxin, oo ay ku jiraan:
* Kala soocida macdanta ama dhagaxa ku jira codsiyada macdanta
* Ammaanka daaqadaha, albaabada iyo albaabada
* Sifeynta hawada ee qalabka elegtarooniga ah
* Shiidista xawaashyada, iniinaha iyo waxyaabaha kale ee cuntada
* Dhimista qaylada matoorada waaweyn
* Kobcinta muuqaalka bandhigyada dukaamada tafaariiqda
* Alaabta guriga sida alaabta guriga iyo agabka guriga
* Noocyada kala duwan ee shaashadaha iyo hawo-mareenada